Matatià - Wikipedia
I Matatià na Matatiasy na Matatiasa dia mpisorona, isan'ireo atao hoe Kohena, tao Modina ao avaratra andrefan'i Jerosalema, izay tsy nanaiky ny fampidirana ny kolontsaina grika hifangaro amin'ny kolontsaina jiosy, na dia nisy aza ny Jiosy sasany nankasitraka izany fifangaroana izany, ka nitarika ny Jiosy mpandala ny jodaisma nentim-paharazana hikomy.
I Matatià sy ilay mpivadi-pinoana, sary nataon'i Gustave Doré tamin'ny taona 1866, araka ny fitantarana ao amin'ny Boky voaolohan'ny Makabeo 2.1-25.
Atao hoe מתתיהו בן יוחנן הכהן / Matityahu ben Yohanan HaKohen i Matatia amin'ny teny hebreo fa Ματταθίας / Mattathias kosa amin'ny teny grika.
I Matatià miantso ireo Jiosy mpitsoa-ponenana, sary nataon'i Gustave Doré tamin'ny taona 1866.
Tamin'ny taona 168 tal. J.K. dia noraran'ny mpanjaka seleokida Antiokosy IV Epifanesy ny fivavahana jiosy ka namoahany didy koa ny fanorenana alitara (na ôtely) ho an'ireo andriamanitra grika tao amin'ny Tempolin'i Jerosalema sy tamin'ny tanàna lehibe tao amin'ny tanin'ny Jiosy. Tamin'ny taona 167 i Matatia izay efa antitra dia nandositra niaraka tamin'ny zanany dimy lahy sy Jiosy hafa koa tany amin'ireo tendrombohitra manodidina mba hikononkonona fikomiana hanoherana an'i Antiokosy IV. Rehefa maty i Matatià dia ny zanany lahy Jodasy no nandimby azy nitarika sy nanamafy ny fikomiana.
Ireto avy ireo zanaka dimy lahin'i Matatià: i Jodasy, i Eleazara, i Simona, i Joany Gady ary i Jonatàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matatià&oldid=973654"
Dernière modification le 28 Aogositra 2019, à 23:27
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2019 amin'ny 23:27 ity pejy ity.